Tababar loo Qabtay Iskoolada Degmooyinka Galkacyo, Bacadweyn iyo Buurtinle oo ku Soo Gabagabobey Galkacyo (Sawiro) • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Tababar loo Qabtay Iskoolada Degmooyinka Galkacyo, Bacadweyn iyo Buurtinle oo ku Soo Gabagabobey Galkacyo (Sawiro)
Tababar loo Qabtay Iskoolada Degmooyinka Galkacyo, Bacadweyn iyo Buurtinle oo ku Soo Gabagabobey Galkacyo (Sawiro)
March 24, 2010 - By: Khalid Yusuf
Tabarkan socoday afar maalin ayaa shalay lagu soo gabagabeeyay howlka shirarka ee hotelka Amal Plaza ee magaalada Gaalkacyo, waxaana looga hadlayay nadaafada iskoolada degmooyinka ka soo qayb galay, tababarkan oo kala ahaa degmada Buurtinle ee gobalka Nugaal iyo degmooyinka Bacaadweyn iyo Galkacyo ee gobalka Mudug.
Waxa ka soo qayb galay macalimiinta iskoolaadka maamulyaasha, walaadiinta iyo ardayda ka socota iskuuladaas tababarkan loo qabtay, tababarkan ayaa waxaa soo qaban qaabiyay jamciyada Tadaamun qaybteeda gobalka Mudug iyadoo horana loogu soo qabtay magaalooyinka Garoowe iyo Boosaaso
Jimciyada Tadaamun oo ah jimciyad ka shaqaysa arrimaha bulshada sida waxbarashada iyo hormarinta deegaanka ayaa u dhistay musqulo iyo baraago iskoolaadka ku yaala gobalka Mudug iyo gobalada kale ee dowlada Puntland.
Xiritaankii siminaarkan ayaa waxaa hadalo kooban ka jeediyay gudoomiyaha jimciyada Tadaamun ee magaalada Gaalkacyo Cabdirishiid Shiikh Cali, waxaana uu ka hadlay muhiimada ay leedahay nadaafada iyo in caruurta laga ilaalsho waxyaabaha keeni kara nadaafad xumada iyo in ay cuduro ku dhacaan waxaana si gaar ah uu farta ugu fiiqay in iskoolaadka ay si wanaagsan uga shaqeeyaan nadaafada suuliyada.
Sidoo kale waxaa halkaas ka hadlay qaar ka mid ah ka qayb galayaashii siminaarka iyagoo ka warbixiyay inta uu socday tabarkan waxyaabaha ay ka faa’iideysteen iyo casharadii halkaa laga bixiyey.
Shiikh Mursal Shire oo ka mid ah culumada gobalka ayaa asna hadalo kooban oo xiritaanka ah ka soo jeedayay waxaana uu sheegay in loobaahan yahay in laga wada shaqeeyoo guud ahaan nadaafada gobalka iyo in bulshadu ay hormar ka gaarto ka shaqaynta arimaha nadaafada lana sameeyo olole balaaran oo lagu taageerayo maamulka degmada.
Ugu danbayntii ayaa waxaa soo gaba gabeeyay isku duwaha Wasaarada Waxbarshada gobalka Mudug Mudane Maxamuud Macalin Nuur, waxaana uu ka hadlay qaabkii wanaagsanaa ee uu u socday tabarkan iyo sida wanaagsan ay uga faa’iidaysteen dhamaan ka soo qayb galayaashii uu u socday siminaarku. Waxaa uu kula dardaarmay maamulayaasha iyo waalidiinta in ay si wanaagsan uga shaqayaan waxbarashada ardayga kana ilaaliyaan wax yaabaha nadafad xumada keeni kara.
Ahmed Mohamed Ali ” Caano geel”
Wakiilka Horseed Media Galkacyo